အစာစားခြင်း Disorders | USAHello | USAHello
ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုသင်ကသင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုခံစားရပုံကိုဆိုလိုတယ်နှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ကြောင်းထင်ပါသလဲ. ရောဂါအစာစားခြင်းနှင့်အတူ, သင် Oozank ထိန်းချုပ်ရန်သင့်စားအလေ့အထများမှသိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. သငျသညျကိုသူတို့မရင့်ပင်အခါသင်အဝလွန်နေကြသည်ဟုခံစားရဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနည်းနည်းကိုစားစေခြင်းငှါ,. မည်သူမဆိုတစ်ဦးစားရောဂါရှိခဲ့ကြပါပြီနိုင်. သို့သော်များစွာသောမိန်းမယောက်ျားထက်တစ်စားရောဂါကနေဆငျးရဲခံရ.
သူတို့သိရပါအခါ Anorexia nervosa ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်နေတုန်းပဲအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်. ကိုယ်အလေးချိန်သင်သည်သင်၏အမြင့်နှင့်အသက်အရွယ်အဘို့အလုံအလောကျချိန်မရဟုဆိုလိုသည်. သငျသညျ anorexia nervosa ရှိပါက:
Bulimia nervosa သင်သည်တခါတရံအလွန်အကျွံစားခြင်းနှင့်သင်ကိုစားသောအရာကိုမထိနျးခြုပျနိုငျတူသောခံစားရသည့်အခါဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအစာကိုအများကြီးစားရကြပြီးနောက်, သင်အစားအစာဖယ်ရှားပစ်ရရန်ရှိသည်ခံစားရတယ်. သငျသညျ bulimia nervosa ရှိပါက:
Bing အစားအစာတွေအများကြီးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သည့်အခါအစာစားခြင်းနှင့်အသငျသညျကိုရပ်တန့်မနိုင်နဲ့တူခံစားမိ. အသီးအသီးတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်အစားအစာတွေအများကြီးစားရကြ6လများ. များသောအားဖြင့်သင်တို့ကိုအစာစားပြီးနောက်ဝမ်းနည်းနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရ.
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အခြားလူများအနေဖြင့်ဖိအားများခံစားရ. သငျသညျပုံစံသို့မဟုတ်ကခုန်လျှင်ဥပမာ, သင်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့လိုအပျကွောငျးကလူကိုပြောတယ်.
သငျသညျအနိမ့် Self-လေးစားမှုရှိ. အနိမျ့ Self-လေးစားမှုသင်ကောင်းတစ်ဦးလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်တဲ့အခါမှာသင်ဘာမှလုပျနိုငျမထင်ကြနေစဉ်းစားကြဘူးသည့်အခါဖြစ်ပါသည်.
လေးနက်သောအစာစားခြင်းမမှန်. သငျသညျအကူညီမတှေ့ဘူးဆိုရငျ, သငျသညျပြင်းပြင်းထန်ထန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးစေခြင်းငှါ. လူအများစုဟာမူးယစ်ဆေးဝါးများမလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်တချို့လူတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့အကြှနျုပျ၏ကုထုံးသို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှင့်အတူစကားပြောရန်လိုအပ်ပါတယ်.